သားရေသိုလှောင်ခန်းကိုအိပ်ခန်းငယ်တစ်ခန်းအတွက်ရွေးချယ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအမြင်အာရုံချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကာမဂုဏ်ပေါ့ပါးမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်. ဒီအနက်ရောင်သည်စတိုင်နှင့်ကြံ့ခိုင်ပြီးစောင်တပ်ထားသည့် headboard အပြင်သိုလှောင်မှုသေတ္တာများကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်တစ်ခုလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်.
အမေရိကစတိုင်ဘက်စုံသုံးအမည်းရောင်သားရေသိုလှောင်အိပ်ရာ ၉၀ ဒီဂရီကွဲပြားသောချိန်ညှိနိုင်သောခေါင်းစီးများသည်ကွဲပြားသောလူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. ကြီးမားသောသိုလှောင်မှုနေရာပေးသော function bed ကိုတက်ပါ. အရည်အသွေးမြင့်သစ်သားပြားသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်. ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏အနက်ရောင်သားရေကူရှင်နှင့်အဖြူရောင်မွေ့ယာကိုညှိနိုင်သော headboard တို့ဖြင့်ခေတ်သစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဖမ်းစားလိမ့်မည်. Baotian မွေ့ယာနှင့်အိပ်ရာတို့သည်သင့်အားနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်သည်.
သားရေသိုလှောင်အိပ်ရာကိုအပြည့်အ ၀ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, မည်သည့်နေရာနှင့်မဆိုလိုက်ဖက်နိုင်သော round corner headboard, ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမှခေတ်မီသည်
1. သစ်သားပြားနှင့်ခြေထောက်များ, သာလွန်ခိုင်ခံ့မှုအတွက်သတ္တုဘောင်, ကြာရှည်ခံမှု
2. Queen မှာရနိုင်ပါတယ်, ဘုရင်, နှင့်အခြားအရွယ်အစား
4. ထိုင်ခုံကို recliner အဖြစ်ချိန်ညှိနိုင်သည်
5. မွေ့ယာကိုပံ့ပိုးရန်ခိုင်မာပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောနွေ ဦး
အမျိုးအစား: ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ်အခန်း; အိပ်ခန်းပရိဘောဂ
ပစ္စည်း: အထည်; အမြှုပ်; သတ္တုအထောက်အပံ့; သစ်သားပြားနှင့်ခြေထောက်များ
function ကို: ချိန်ညှိနိုင်သော headrest; သိုလှောင်အိပ်ရာ
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): လူပျို; ပြည့်သည်; ဘုရင်မ; ဘုရင်
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): စုစုပေါင်း4PCS
မေး: သင်၏ ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဘာဝန်ဆောင်မှုလဲ?
က: ကျနော်တို့ပြီးနောက် - ပြီးနောက်နောက်ခြေရာခံတ ဦး တည်းအပေါ်ပြုပါ. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးပြissueနာကနေမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပါ, ကျနော်တို့ဖြေရှင်းချက်ထွက်တွက်ဆနှင့်သင်တုံ့ပြန်ချက်ပေးလိမ့်မယ်.
မေး: မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
က: ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည် 40HQ သို့မဟုတ် 20GP ဖြစ်သည်(အပိုကုန်ကျစရိတ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်), သငျသညျ 40HQ သို့မဟုတ် 20GP ပေါင်းစပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ရောထွေးနိုငျသညျ.
က: ဟိုတယ်စီမံကိန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး CA117 ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအားလုံးသည်မီးခံနိုင်ရည်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည်, BS5852, BS7177, BS7176, နှင့် E0 / E1.
က: ဟုတ်တယ်, ကျွန်ုပ်တို့တွင် Top grain သားကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှရွေးချယ်ရန်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်, PVC, PU, သို့မဟုတ်ထည်.
က: ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့သိုက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်, ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၃၅ ရက်ထိကြာနိုင်သည်.
က: ငါတို့သည်သင်တို့မှတိုက်ရိုက်ထည်သို့မဟုတ်သားရေနမူနာပို့နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ ODM ထုတ်ကုန်နမူနာအခကြေးငွေပေးဆောင်ရပါမည်, နောက်မှ 10 pcs အမှာစာနမူနာကြေးကိုပြန်ပေးမည်.
က: ဆိုဖာများ၏အာမခံချက်သည်2အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအဘို့အနှစ်, 1 ပြင်ပသားရေများအတွက်တစ်နှစ်; မွေ့ရာသည် 10 innerspring ဖွဲ့စည်းပုံအဘို့အနှစ်.